Faransiiska oo weerar ku qaaday IS - BBC News Somali
Faransiiska oo weerar ku qaaday IS
27 Sebtembar 2015
Image caption Diyaaradaha dagaalka ee Fransiiska ayaa macluumaad aruurinayay intaysan weerarka bilaabin.
Xafiiska madaxweynuhu waxaa uu sheegay in Faransiisku ay fuliyeen duqeyntaas oo ku saleysan macluumaad la soo uruuriyay muddo laba toddobaad ah oo sirdoon la sameynayay.
Hadal la soo saaray, waxaa lagu xaqiijiyay wax loogu yeeray sida adag ee Faransiiska ay uga go'an tahay inay la dagaallamaan kooxda IS, waxaana warkaasi sheegay in ay kooxdaas duqeyn doonaan mar kasta oo ammaanka qaranka uu khatar galo.
laakiin warku waxaa uu sheegay in dad rayid ah oo reer Suuriya ah ay sidoo kale dhibaato kala kulmayaan ciidammo daacad u ah madaxweyne Bashar Assad, isla markaana si intii hore ka degdeg badan loogu baahan yahay xal siyaasadeed.
Xubno sar-sare oo ka tirsan IS ayaa Faransiiska ka dhigtay bartilmaameed, boqollaal muwaadiniin Faransiis ah ayaana haatan la rumaysan yahay inay u dagaallamayaan kooxaha islaamiyiinta mayalka adag ee gobolka bariga dhexe.